Soomaali Hoggaankay Eebbe Haybsatay Yay Heshay FARMAAJO+KHEYRE = GUUL. W/Q Muxyadiin Xusseen Ciid | RBC Radio
Soomaali Hoggaankay Eebbe Haybsatay Yay Heshay FARMAAJO+KHEYRE = GUUL. W/Q Muxyadiin Xusseen Ciid
Posted on May 28, 2017 Maqaal, RBC, Wararka
Soomaali Hogaankay Eebe Haybsatay Yay Heshay FARMAAJO+KHEYRE = GUUL.
Soomaali wax walba haweeydee, marna ma ayan waayin gargaarka eebe, marwalba allaha weyni waxa uu u furayay faraj, ay uga samatabaxaan halis ka wayn inta markaas ay ka cabanayso. Ducada ugu wayni waxa ay aheyd in allaah dadkan u xulo dad matali kara, ugana roon qolooyinkii sheeganayay xukunkooda. Su’aashu waxa weeye allaha weyni maka aqbalay ducadaas?
Soomaali waxa halakeeyay eex, musuq, cadaalad daro iyo jahli, intuba waa inta laga rabo hogaanka Soomali raadinayso in uu dagaal la galo, in uu fahamsan yahay dhibta jirta in ay intaas tahay. Hadaba hogaanka intaas la dagaalamayaa waa in uu yahay mid leh sifaha qofka hogaanka ah lagu yaqaan, oo ay ugu horeyso .
⦁ In uu og yahay halka la taagan yahay, halka loo socdo iyo waxa lagu gaari karo
⦁ In uu leeyahay kartidii iyo dadnimadii uu wax ku hogaamin lahaa
⦁ In uu yahay daacad ka runsheegaya qalbigiisa iyo afkiisa, Runtana dhadhansiiya kuwa dhagahoodu diidan tahay
⦁ In uu yahay nin aan damac aduun siisan waxa uu danta u arko, MAYA-na ka oran kara waxa uusan u arag umadiisa in ay danni ugu jirto.
⦁ In uu yahay nin aan eex iyo nin jecleysi ag imaan, xoogana saara u cadaalad falka dadkiisa.
⦁ In uu yahay aamin, xafidaya amaanada dadka iyo dalka uu hogaaminayo.
⦁ In uu yahay aftahan, fariintiisu ruxayso quluubta shacabkiisa.
⦁ In uu yahay nin naxariis iyo kalgacal u haya dadkiisa iyo dalkiisa, ayaguna dareemayaan naxariistaas, isna dugsanayaan.
Siyaasada Soomaaliya iyo dowladnimadaba waxa ay ahayd mid laga soo minguuriyay gumeystihii dadka iyo dalkaba aan danta u hayn, waxaa 1960-kii Soomaaliya ka hanaqaaday dowladnimo taas oo dadkii Soomaaliyeed ilaa iyo maantadan aan joogno u haystaan in dowladu tahay mid la boobo hantideeda, siyaasadiina u qaatay been iyo balanfur. Waxa uu gumeystuhu uga tagay Afrika ma ahayn wax sahlan, mana ahayn waxa qaarada yurub ka jiray, ee waxa ay ahayd xargo laba dible loogu xiray dowladihii la yiri waa Xarowdeen, mar walbana waxaa jiray haadaamo u qodnaa oo markii la fahmi waayo afka looga guro, Soomaaliya haadaamaas ayay ka dhexqaylinaysaa maanta.
Taas waxa uu sabab ahaa markii la waayay madax soomaaliyeed oo fahamsan in dalka iyo dadku ayagu masuul ka yihiin, danta iyo xalku waxa Soomaali ugu jirtana umadooda u horseeda.
Madaxweyne Farmaajo waxaa ka muuqday sifo walba oo Soomaali u oomanayd, waxa uu soo jiitay quluubtii inta badan, waxaa uu godka ka soo saaray dadnimadii iyo soomaalinimadii, waxaa ilin soo wada fuushay indhihii hooyooyin badan oo soomaaliyeed, dhalaan aan dowladnimo iyo Soomaalinimaba ku dhalan, waxaa baxday AR FARMAAJO II GEEYA, waxaa timid su’aal caalamku isweydiiyay Yuu yahay shaqsigan Soomaaliyi soo heshay maanta? ayaga oo filayay wajiyadii Soomaalinimada godka gashay mid kaloo la mid ah in uu soo muuqan doono.
Hogaan daacad u ah umadiisa waxaa lagu yaqaan in uu u xulo qof asaga uga sii daacadsan si himiladooda iyo halka ay beegsanayaan loogu hogaamiyo, waxaa cadaatay taasi in uu ka dhabeeyay Madaxweyne Farmaajo markii uu xilka Ra’iisul Wasaaranimada u magacaabay Mudane Xassan Kheyre, oo sifayaashii hogaanka Soomaali u oomanayd kasoo wada bidhaameen, aqoonyahan, aftahan, geesi, daacad, naxariis, wadaniyad, dadaal iyo kirtiba. Taasi waxa ay daliil u tahay in Soomaali waa cusub u baryay, in wado ilaa iyo 1960-kii aan loo horseedin maanta qaadi doonto, walow caqabadaha jira iyo jid gooyada taal aysan oolin xiligii la qaatay xornimada, waayo? cadowgu maanta dhinac walba ayuu kaa xigaa, ilaa uuba noqon karo walaalka kula dhashay adiga, marka ma ahan in aan iska indho saabayno waxa runta ah ee madaxda Soomaaliyeed maanta horyaal, waxaase Soomaali in ay ku faraxdo mudan in ay haysato geesiyaal hadii ay garab istaagto dhib walba wajihi kara, kana mira dhalin karta hawl walba oo ay u gacan qaadaan.
Tilmaamaha cajaa’ibka ah ee RW Kheyre ka muuqda waa kuwii Soomaaliyi u dhutinaysay mudo ka badan nus qarni, waa nin dareensan Soomaaliya in koox ama qabiili afduub u haysan karin, waa nin diyaar u ah Soomaaliya in uu ka qaado meesha ay taal, una horkaco wado cusub, waa wadani codkiisa dananaya kicinkaro qofkii in yar oo wadaniyad ahi ku jidho qalbigiisa, waxa uu fahmay musuqmaasaqu in uu ka mid yahay cudurada Soomaali dilooday, dagaalkii ugu waynaa oo lagu qaadana waa uu iclaanshay, waxa uu toosh ku ifiyay dulmiga, asaga oo yiri Soomaali dhexdeed u ogalaanmeyno in ay dulmi danbe kala gasho, waxa uu u muuqdaa halyeey wadani ah Soomaalina heybinaysay in badan.
Fahamka iyo dareenkiisa garasho iyo aqoontiisa ayaa ah mid in la xuso mudan, waxana cadeynaysa su’aal markii mudo bil ah uu xukunka hayay uu weydiiyay mid ka mid ah wariyayaasha SNTV, oo aheyd sidan;
Ra’iisul Wasaare Kheyre: Maya, Dastuurku waa waxa isku haya umada Soomaaliyeed. Waa waxa haga xukuumada, Baarlamaanka, Madaxweynaha iyo hay’adaha kale ee dowlada. Dadka waa in uu fahmo meesha uu marayo Dastuurka, meesha la rabo in la gaarsiiyo iyo waxa ka dhiman.
Midkale oo Wadaniyadiisa noo cadeynaysa waxa an kaso qadan karnaa oraah uu u jeediyay ciidanka qaranka ee uu Balidoogle ugu tagay asaga oo baraya qiimaha calanka garabka bidix ugu dhaganaa waxuu yiri ” Calanka garabka idiinku dhagan waakii Halyeygii Xalane u diiday in uu cadowga uga cararo, dhulkana uu taabto, idinkana sida xalane ayaa la idinka rabaa in aad u ilaalisaan jiritaankiisa difaacdaan una dhimataan, anaguna aan idinku xusno sida magaciisu maanta Xalane u nool yahay ayaad u noolaan doontaan”.
Mudadii yareyd ee uu xukunka hayay talaabooyin badan oo caqabado ah ayaa soo wajahay, dhamaanna wuu ka talaabsaday, waxa uuna tusay in waxa uu ku taagan yahay ama go’aanada uu qaatay sax yihiin qarankana dantiisu ku jidho, gadaalna uusan uga laabanayn. Taasina waa sifaha hogaanka lagu yaqaan kuwa ugu qaalisan laguna xusho in ninka hogaanka ahi uu leeyahay dhiifonaan waxa uu u arko xaqa u bareeri karo.
Su’aal kama taagna in hogaan sifuhuu lahaa Madaxda Soomaaliya maanta ka muuqato, sidoo kalana ka doodi mayno in ay awood u leeyihiin in ay Soomaaliya meesha ay joogto maanta ka dhaqaajiyaan una horkacaan Nabad, Nolol iyo Dowladnimo aan mudo ka badan nus qarni ruux Soomaali ahi ku naaloon.
Su’aal baase soo laablaabantay in badan, taasoo ah cadowgu ma u ogalaanayaa in madaxdani umadooda u adeegto, u horseedaan nolosha ay u qalmaan, u madax banaanaadaan aayahooda?, hore ayaan u xusay taasi waa maya, dagaal ayaa lagu qaadayaa lagu fashilinayo dhinacuu doono ha ka yimaadee, waxase looga fadhiyaa in ay difaacdaan waa shacabka Soomaaliyeed oo hogaan la’aanta u baaba’ay, wadankoodiina balo ugu adeeganayso.
Waxaan maqlay in madaxdayada cusub dadka qaar yiraadaan “WAA DEGDEGAAN” la yaab ma leh in kuwo sidaas qabaan, waayo? Soomaaliya in mudo ah majirin dad qorshe qaran ama dan guud inta ay u istaagaan waqti go’an wax ku qabta, taasaa waxa ay keenaysaa in hawl la qabto waliba waqtigii lagu balamay lagu qabtay ay u muuqato mucjiso, degdegna logu yeero.
Waxaa jirta aragti la dhaho “BROKEN WINDOW THEORY” oo oranaysa “Hadii aan danbiga kiisa ugu yar aan wax laga qaban, sida daaqad jabsan, kiisa weyna wax lagama qaban karo, marka waa in aadan ogalaan in aad indhaha ka qarsato danbiga kiisa ugu yar” waa ku mahadsanyihiin Madaxdeenu in ay fikirkaas ku dabaqaan Soomaaliya, dadka aan fahminna degdeg haku sheegaan.
2 Responses to Soomaali Hoggaankay Eebbe Haybsatay Yay Heshay FARMAAJO+KHEYRE = GUUL. W/Q Muxyadiin Xusseen Ciid
Waa qodob in la xuso mudnaa.
Aad ayaana qoraaga uga mahadcelinayaa dadaalka uu gashay qormadan iyo in uu fahamkayaga kor u qaado.
ina xuseen ciid Alle haku barakeeyo. waxaan rajaynayaa inay labadan hogaamiye noqdaan mahaatiirro iyo ordoogaanno cusub.
AL-QAYDA HA NABDOONAATO!